Homeसमाचारज्योतिष शास्त्र अनुसार आइतबारका दिन यस्ता काम गर्नाले मिल्नेछ सफलता
November 15, 2020 admin समाचार 9127
शास्त्रले मानिसको जी’वन पद्धति’का विषयमा सवै जान’कारी दिएको हुन्छ । कुन दिन के काम गर्ने ? के गर्दा जी’वनमा सफलता मिल्छ ? के कस्ता काम गर्नुहुँदैन ? ल’गायतका यावत विषयमा धर्मशास्त्रमा सवि’स्तार व’र्णन गरिएको पाइन्छ । जसले मानव जीव’नलाई संस्कारी बनाएको हुन्छ ।
आज आइतबार । ज्योतिष शास्त्र’मा आइतबारका दिन केही महत्वपूर्ण कार्य गर्नाले उसले स’फलता पाउने उल्लेख गरिएको छ । ज्योतिषशास्त्र भनेको सौर्यम’ण्डलमा रहेका ताराहरू र ग्रहहरूको आपसी सम्ब’न्धबाट प्राप्त हुने किरण अथवा तरंगलाई सुक्ष्म गणितीय सूत्रबाट अध्ययन गरेर त्यसको यस पृथ्वीमा विद्य’मान जड र चेतन माथि पर्ने प्रभावको अध्ययन र विश्लेषण गर्ने अ’द्वितीय विज्ञान हो ।
ज्योतिषशास्त्र वेदको आँ’खाको रूपमा रहेको कुरा स’र्वविदितै छ । के तपाई कुनै काम गर्दै हुनुहुन्छ वा गर्ने सो’चाइमा हुनुहुन्छ ? यदि हुनुहुन्छ भने दिन, बार, नक्षत्र र राशी सवै मि’लाएर काम गर्दा तपाईलाई स’फलता मिल्छ ।
मानिहरुले कुनै पनि शुभ’कार्य गर्दा दिन हेराएर मात्रै गर्ने गरेको पाइन्छ । हिन्दुधर्म शास्त्र अनुसार तपा’ईको खानपान, हिडडूल, कामको शुरुवात लगायतका विषय’हरुमा तपाईले बार र समयलाई ख्याल गरेर यी काम गर्दा फाइ’दा पुग्छ। कुनै पनि शुभ कार्य गर्नुपर्दा सवैभन्दा पहिले गणेशको पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ । ज्योतिषशास्त्र अ’नुसार आइतबार के के काम गर्दा सफ’लता मिल्छ भन्ने बारेमा यहाँ प्र’स्तुत गरिएको छ ।
आइतबारका दिन राज्या’भिषेक गर्ने, मन्त्र–उपदेश गर्ने, गीत, वाध्य, पलाकिमा बस्ने, रा’जसेवा, औषधी नि’र्माण गर्ने, गाईगोरु किनबेच गर्ने, हवन गर्नाले लाभ हुने शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ । शास्त्रानुसार आइत’बारका दिन सुन, तामा, उनी, बस्त्र आदि किन’बेच गर्ने रातो बस्तुको कारोबार गर्नु उप’युक्त मानिन्छ । -खबरहब बाट
आज कार्तिक ३० गते आईतबारको राशिफल हेरेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्…
कोभिडको भारतीय भेरि’यन्टले विश्वमा सं’कट ल्याउन सक्ने चे’तावनी
May 11, 2021 admin समाचार 4585
भारतबाट फै’लिएको नयाँ भेरियन्टको कोभिडले विश्वमा आर्थिक सं’कट आउन सक्ने चे ‘ता वनी दिइएको छ । भारतमा भेटिएको भेरियन्ट अन्य देशमा पनि भेटिएपछि वैज्ञा’निकहरुले चे ता’ वनी जारी गरेका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओको
December 27, 2020 admin समाचार 8296
रमेश प्रसाईको जन्म ताप्लेजुंगमा २०५० साल’मा भएको हो । उनका बुवा आमा शिक्ष’ण पेशामा संलग्न छन् । त्यसैले उनी साथैदेखि चेतन’शिल थिए । दुवै आँखा नभए’का उनी जन्म’जात नै यस्तै हुन् । उनी सामाजिक विषयमा
April 30, 2021 admin समाचार 5548